Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: माओवादी भित्रै अल्पमतमा परेका प्रचण्डद्वारा शेर बहादुर देउबा लाई प्रयोग गरी काङ्रेस फुटाउने खेल, हेरौं अब के के हुने हो !
साथ लिएको छ। यस सम्बन्धमा उपसभापति एवम् काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले जिम्मेवार मानिसले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै हस्ताक्षर अभियानबारे आफूले पत्रिका पढेर थाहा पाएको जानकारी दिनुभयो। पौडेलको भनाइ छ, 'माओवादीलाई बदलेर शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा ल्याउनु वर्तमानको मुख्य कार्य हो, संसदीय दलको नेता बदल्ने व्यर्थ कुरामा समय बर्बाद गर्नु उचित होइन।' पार्टीको सभापति र संसदीय दलको नेता पदमा चुनाव लडेर दुवैमा नराम्रोसँग पराजित हुनुभएका देउवाले पछिल्लोपटक सुरु गर्नुभएको अभियानलाई पार्टी नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको छ। नेपाली काङ्गे्रसमा विलय भएको चार वर्ष पुग्दा नपुग्दै विघटित प्रजातान्त्रिक काङ्गे्रसका सभापति देउवाले निर्वाह गर्नुभएको वर्तमान भूमिकाले पार्टीको एकतालाई गम्भीर क्षति पुर्याएउने ठानिएको छ। ०५९ सालमा त्यसबेलाको शक्तिशाली दक्षिणपन्थीहरूको आड–भरोसामा पार्टी विभाजन गराउनुहुने देउवा यतिबेला अति वामपन्थीहरूको मोहजालमा फस्नुभएको छ र उहाँ तिनकै आडमा पार्टी विभाजन गराउनसमेत मानसिक रूपमा तयार रहनुभएको बताउन थालिएको छ। सकेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राखेर संसदीय दलको नेता पद हात पार्ने, सो पद प्राप्त गर्न नसके आफ्ना समर्थकहरू लिएर पुनः छुट्टिने योजना देउवाले बनाउनुभएको बुझिएको छ। पछिल्लो समयमा देउवा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति ज्यादा सकारात्मक रहँदै आउनुभएको छ। प्रचण्डसँगको ज्यादा उठबसका कारण देउवाले भावनात्मक रूपमा काङ्गे्रसको प्रतिनिधित्व गर्नसमेत छोडिसक्नुभएको छ। उच्चस्तरीय संयुक्त बैठकहरूमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाँदा पनि उहाँले पार्टी लाइनविपरीत माओवादीको पक्षमा धारणा राख्ने गर्नुभएको छ। केही महिनाअघि दक्षिणकाली रिसोर्टमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा देउवाले माओवादीको पक्षमा बोलेर काङ्गे्रसलाई अप्ठ्यारोमा पारेपछि बैठकमा सहभागी अर्का नेता डा. रामशरण महतले अर्को कोठामा लगेर देउवालाई नराम्रोसँग झपार्नुपरेको थियो। त्यस्तै एउटा बैठकमा रामचन्द्र पौडेलले देउवालाई सचेत गराउनुपरेको थियो। यसरी देउवा माओवादीको पक्षमा उभिनुको कारण प्रचण्डको उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने उधारो आश्वासन भएको बुझिन्छ। भनिन्छ, आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रचण्डले देउवालाई समर्थन र सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ। र, देउवाले प्रचण्डको आश्वासनमा भरोसा राख्नुभएको छ। गत महाधिवेशनमा पराजित भएपछि देउवाले आफ्नो पराजयको दोष नेपालभित्र राष्ट्रपति र बाहिर मित्रराष्ट्र भारतलाई दिँदै आउनुभएको छ। चीन समर्थित मानिने वर्तमान सत्ता गठबन्धनका अगुवाहरूले देउवाको मानसिकतामा खेल्ने योजना बनाएको हेक्का सम्भवतः उहाँलाई छैन र उहाँ प्रचण्ड र झलनाथलगायतका नेताहरूबाट प्रयोग हुँदै आउनुभएको छ। देउवाको विचारमा 'माओवादीहरू पूरै बदलिइसकेका छन्, अब उनीहरूलाई काङ्गे्रस र एमालेलगायतका दलहरूले पूर्ण सहयोग पुर्यारउनुपर्छ। लडाकु व्यवस्थापन पनि माओवादीले भनेबमोजिम गर्नुपर्छ र अनावश्यक अडान लिएर माओवादीलाई हैरानी दिनुहुँदैन।' देउवाको यस्तो विचार संयुक्त बैठक र अन्य संवेदनशील भेटवार्ताका क्रममा समेत प्रकट हुन थालेको छ। यसरी आफ्नो प्रवक्ताझैं प्रस्तुत हुन थालेपछि माओवादी नेतृत्वले देउवाको उच्च प्रशंसा गर्न सुरु गरेको हो। चीन समर्थकहरूसँग 'कम्फोर्ट' महसुस गर्नुहुने उहाँसँग प्रचण्ड र झलनाथको गठबन्धनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले आश्चर्यजनक र घातक मानेका छन्। यस गठबन्धनले देउवालाई अन्ततः फेरि पनि लोकतन्त्रकै विरुद्ध उभ्याउनसक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएकै भरमा काङ्गे्रसभित्र बनिबनाउ एकता र समझदारीलाई भत्काउन अग्रसर हुनुहुने देउवा कदाचित माओवादीको समर्थनमा झलनाथझैं प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने उहाँ माओवादी आन्दोलनको कति ठूलो सेवक बन्नुहोला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो क्रियाकलापले नेपाली काङ्गे्रसमा चिन्ता बढाएको छ। पार्टीले उहाँलाई समयमै तह लगाउन सकेन भने अन्ततः काङ्गे्रसले देउवाबाट पुनः धोखा पाउने निश्चित मानिन्छ। तीनपटक प्रधानमन्त्री बन्दा तीनैवटा नकारात्मक कीर्तिमान बनाउनुहुने देउवाबाट काङ्गे्रस कसरी जोगिन सक्ला, व्यग्रतापूर्ण त्यसैको प्रतीक्षा हुँदै छ।